Njem Ezinụlọ | Ekechukwu, IN | Countylọ Ọrụ Ọbịa nke Jackson County
Nke a bụ anyị
Pịa maka ihe omume nke ọnwa a na Jackson County!
Soro ihe dị ọhụrụ na Countygbè Jackson.
Pịa ebe a ka ịhụ mmemme & mmemme anyị.
Ememme anyị & Ihe omume
Lelee ihe omume niile pụrụ iche site na ịhọrọ ụbọchị na kalenda ma ọ bụ site na ịpị mmanya uhie maka ndepụta zuru ezu.
Hụ Ihe Omume
njem ahụ malitere
Obodo Jackson, IN
Site na nnukwu mkpokọta ebe ntụrụndụ n'èzí na mmemme enyi na enyi ezinụlọ, ndị ọbịa nwere ike ịhụ ọtụtụ ihe omume site na ịkpọtụrụ anyị na Jackson County Visitor Center. Na-eme ka ọ bụrụ njem dị mfe na-etolite ntụziaka ọ bụla, anyị bụ otu awa n'ebe ndịda nke Indianapolis, otu awa n'ebe ugwu nke Louisville, KY, otu awa site na Cincinnati, OH, na a hop-skip-and- jump si Bloomington na Nashville, Indiana. Naanị wepụ Exit 50 kwụsịrị Interstate 65 wee bịa hụ anyị. Anyị dịgasị iche iche nke ezinụlọ enyi na enyi omume na ememme, mee ka o kwe gị ike ịmepụta oge agaghị echefu echefu. Anyị na-agba gị ume ka ị mee ka anyị nweta ozi niile ị nwere ike iji mee atụmatụ njem gị ọzọ na Jackson County, Indiana. Pịa ebe a maka obere onye ndu na Jackson County!
Obere Obodo Anyị
Edebere na 1850, obere obodo a na-anya isi n'ihe nketa ya. Ịnọdụ n'okporo ụzọ steeti 58 na 135, ị nwere ike ịgagharị na Freetown-Pershing Museum, ebe obibi nke ọtụtụ akụ gụnyere otu n'ime bison 7 Jackson County, na ụlọ ahịa ice cream ma ọ bụ Sgt. Rick's American Cafe na BBQ. Chọgharịa ime obodo mara mma ka Osisi nnu Salt Creek ma nweta uto nke mmanya ha na-enweta mmeri mgbe ha na-ewere echiche mara mma mara mma.
Obodo a na-eme ememme na ọ bụ oche mpaghara na ebe obibi maka akụkọ ntolite ọgaranya yana ụlọ ikpe obodo na-abụ nne na nna na saịtị niile akụkọ ihe mere eme na mpaghara na mpaghara gbara ya gburugburu. Obodo na-enwe ọ beingụ ịnọ n'ụlọ maka mmeri Ihe ngosi Jackson County. Brownstown na-anọdụ na US50, nke bụ okporo ụzọ na-aga n'ụsọ oké osimiri yana okporo ụzọ maka njem ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ. Mgbe ị nọ ọdụ n'ugwu ndị mara mma nke ọhịa Jackson-Washington State na Hoosier National Forest, ọ bụ naanị nkeji iri site na I-10.
Naanị ịpụ ngwa ngwa I-65 na US 31, Crothersville bụ ebe obibi ndị Tigers dị mpako na kwa afọ Red, White na Blue Ememme. Ememme a na-eme ememe ịhụ mba n'anya na ọkọlọtọ America. Nke mbụ mere na 1976 mgbe United States mere ememe bicentennial ya. Ụlọ Nzukọ Hamacher na-arụ ọrụ n'ime obi obodo a na-eme nke ọma. Enwere ike ịnụ ụtọ ọtụtụ mmemme obodo na ụlọ ihe nkiri nri abalị n'ebe a mere akụkọ ihe mere eme. N'ịbụ ndị nwere ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ụlọ ahịa, nke a bụ onye mmekọ anyị na ndịda na ọbịa ọbịa nke Jackson County.
Seymour dị mfe ịnweta na Exit 50 na I-65, US 50, US 31 na Indiana 11. Meedy W. Shield na nwunye ya Eliza P. Shield debanyere efere nke obodo Seymour na Eprel 27, 1852. Seymour toro ngwa ngwa mgbakwunye nke Ohio na Mississippi Railroad na 1854 ma n'oge na-adịghị anya ghọrọ obodo kachasị na Jackson County. Seymour na-enye ụlọ ọrụ, ịzụ ahịa, ebe obibi, iri nri na nnukwu emume na mmemme, gụnyere Seymour Oktoberfest, nke na -asọpụrụ ihe nketa Jackson County nke German. Rock'n Roll Hall of Fame inductee John Mellencamp mụrụ na Seymour, ndị ọbịa nwere ike inyocha ọtụtụ akara obodo niile. Seymour bụkwa saịtị nke ohi ụgbọ oloko na -agagharị agagharị nke ụwa site n'aka ndị ama ama Reno Gang. Lelee vidiyo akụkọ a site na ịpị ebe a. Nnukwu ogbe ndịda na -enye ohere dị iche iche mana ọ naghị efunahụ obere obodo ahụ.
Medora dị na nsọtụ ndịda ọdịda anyanwụ nke Jackson County ma na-enye echiche na-akpali akpali yana mmetụta obere obodo ahụ. Kwụsị n'akụkụ àkwà mmiri kpuchiri ogologo oge atọ kachasị ogologo na United States, nke dị na Indiana 235 ma ọ bụ hụ Medora Brick Plant. Ndị enyi nke Medora Covered Bridge na-ahazi nri abalị kwa afọ na akwa mmiri, nke bụ ahụmahụ iri nri pụrụ iche na akwa mmiri na mgbakwunye na ịre ahịa na ntụrụndụ dị jụụ. Pịa ebe a ka ịgụ banyere nri abalị. Medora bụ ihe atụ nke ile ọbịa na nke ahụ pụtara n'oge Medora Goes Pink ememme na Ọktọba ma ọ bụ Ememe Ekeresimesi Medora ke December. Enwere ike ịnweta Medora site na US 50 ma ọ bụ Indiana 235.
Vallonia bụ ebe mbụ biri na Jackson County yana ọbụlagodi ịgba ọsọ ka ị bụrụ onye isi ala nke steeti ahụ. Vallonia dị na mpụga oche obodo ma nwee ike ịnweta ya site na Indiana 135. Fort Vallonia bụ ihe ncheta banyere akụkọ ihe mere eme nke Vallonia na mmalite afọ 1800 ma na-adị ndụ na Ọktọba n'oge Ememme Fort Vallonia Days. A na-ahụ ugwu na isi ya site na Vallonia na ọtụtụ ahịa ugbo na ịmịpụta ihe nwere ike ịchọta gburugburu ebe a, nke a maara nke ọma maka cantaloupe na mmiri mmiri.
LEE IHE MERE
chọpụta akụkọ ihe mere eme nke Jackson County
Ebe nkiri Mere Eme
Otu n'ime ebe kacha adọrọ mmasị anyị kemgbe ihe karịrị afọ 60 bụ Brownstown Speedway, dị na Fairlọ Ngosi Jacksongbè nke Jackson. A na-agba ọsọ ọsọ ọnwa asatọ site na afọ na egwu ntụ, anyị na-enyekwa klaasị dị iche iche. Ndị ọbịa nwekwara ike ịchọpụta akụkọ ihe mere eme nke Jackson County na nke ọ bụla n'ime ụlọ ngosi ihe mgbe ochie isii anyị, gụnyere Freeman Field Army Airfield Museum na Museum Fort Vallonia. Ndị na-agụ akụkọ ihe mere eme nwere ike ịbanye na ọrụ Jackson County na-arụ na Railway Rail, nke nyeere ndị ohu agbapụ aka iru nnwere onwe. E nwekwara ọtụtụ nke akụkọ ihe mere eme ụzọ, kpuchie àkwà mmiri, na gburugburu ọba maka ọbịa na-enwe.
Ndị hụrụ nka n'anya na-enwe obi ụtọ
Obodo Arts Scene
Ndị hụrụ nka n'anya ga-enwe ọ visitsụ nleta na mkpokọta nka dị iche iche nke Jackson County. Ebe ndịda Indiana maka Arts, Swope Art Collection, na Brownstown Fund for Arts niile na-atụnye ụtụ na ọdịbendị nke mpaghara ahụ. Ndị ọbịa nwere ike ịga ngosi na otu n'ime ụlọ ihe nkiri nke obodo anyị ma gaa njem n'okporo ụzọ iji hụ ọtụtụ ndị na-ese ihe na mpaghara.
G SCỌ NTA
ntụrụndụ n'èzí na nke kacha mma
Maka ndị anyị hụrụ n'anya n'èzí, Jackson County na-enye ọtụtụ nhọrọ ntụrụndụ. Na Muscatatuck National Wildlife Refuge na-enye ịchụ nta, ịkụ azụ na nnụnụ ohere. Ma ọ bụrụ na ọ dị na Jackson-Washington State Forest, Mpaghara Ntụrụndụ Na-enweghị Nkọ Ọkụ ma ọ bụ Hoosier National Forest ị nwere ike ịhọrọ ebe a na-ama ụlọikwuu nke kwesịrị ekwesị maka njem ụlọ-pụọ-site n'ụlọ. Gba ígwè, ịgagharị na ịnya ịnyịnya bụ ụzọ ndị a ma ama iji gaa ebe ndị a na-emetụbeghị, ebe ha na-agafe ọtụtụ narị puku acres. Maka onye nleta na-eme egwuregwu, anyị na-enyekwa golf mara mma.